Yeremia Annyae Yehowa Som
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maya Moore Myanmar Norwegian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
SO W’ABAM abu pɛn ma wunyae a anka woagyae Yehowa som?— * Ɛte saa wɔ nnipa pii fam. Yeremia tee nka saa bere a na ɔyɛ abofra no. Nanso, wamma nea afoforo kae anaa nea wɔyɛe ammu n’abam. Ma yensusuw Yeremia ho nhwɛ. Ná Onyankopɔn pɛ n’asɛm paa, nanso ɔpɛe sɛ ogyae adwuma a Yehowa de maa no no.
Ansa na wɔrewo Yeremia no, Yehowa, nokware Nyankopɔn no, paw no sɛ odiyifo a ɔbɛbɔ ne nkurɔfo a na wɔnnyɛ n’apɛde no kɔkɔ. Wunim nea mfe bi akyi no, Yeremia ka kyerɛɛ Yehowa?— Ɔkae sɛ: “Minnim kasa, na meyɛ abofra.”
Mmuae bɛn na wususuw sɛ Yehowa de maa Yeremia?— Yehowa fi ayamye mu ne no kasae ma ohuu nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ pefee. Ɔkae sɛ: “Nka sɛ, ‘Meyɛ abofra.’ Na mmom obiara a mɛsoma wo ne nkyɛn no, kɔ, na asɛm biara a mɛhyɛ wo no, ka. Nsuro.” Dɛn nti na na ɛnsɛ sɛ osuro? Yehowa kae sɛ: “Midi w’akyi, na megye wo.”—Yeremia 1:4-8.
Nanso sɛnea yɛaka dedaw no, akyiri yi, Yeremia abam bui. Nea enti a ɛte saa ne sɛ, Onyankopɔn a na ɔsom no nti, nkurɔfo dii ne ho fɛw. Ɔkae sɛ: ‘Obiara serew me na wodi me ho fɛw da biara.’ Enti ɔyɛɛ n’adwene sɛ obegyae. Ɔkae sɛ: “Meremmɔ [Yehowa] din, na merenkasa ne din mu bio.” Nanso, so ogyaee Yehowa som ampa?
Yeremia kae sɛ: ‘Yehowa asɛm yɛɛ me komam sɛ ogya a ɛredɛw a wɔato mu me nnompe mu, mebrɛe, na mantumi ankura mu bio.’ (Yeremia 20:7-9) Ɛwom sɛ ɛtɔ mmere bi a na Yeremia bɔ hu de, nanso ɔdɔ a na ɔwɔ ma Yehowa nti, wannyae adwuma no yɛ. Esiane sɛ Yeremia annyae nti, ma yɛnhwɛ ɔkwan Yehowa faa so bɔɔ ne ho ban.
Yehowa ka kyerɛɛ Yeremia sɛ ɔmmɔ Yerusalemfo kɔkɔ sɛ sɛ wɔansesa amfi wɔn akwammɔne ho a, ɔbɛsɛe kurow no. Bere a Yeremia kaa asɛm no kyerɛɛ nkurɔfo no, wɔn bu fuwii, na wɔkae sɛ: “Ɔbarima yi fata owu afobu.” Nanso, Yeremia paa wɔn kyɛw sɛ ‘wontie Yehowa asɛm.’ Na ɔtoaa so sɛ: ‘Sɛ mukum me a, moakum obi a ne ho nni asɛm, efisɛ Onyankopɔn na ɔsomaa me sɛ memmɛka nsɛm yi nkyerɛ mo.’ Afei, wunim nea esii?—
Bible ka sɛ: “Mpanyimfo no ne ɔman no nyinaa ka kyerɛɛ asɔfo ne adiyifo no sɛ: ‘Owu afobu mfata ɔbarima yi, efisɛ Yehowa, yɛn Nyankopɔn din mu na ɔkasa kyerɛɛ yɛn.’” Enti bere a ehu amma Yeremia annyae asɛm no ka no, Yehowa bɔɔ ne ho ban. Afei, ma yɛnhwɛ nea ɛtoo Yehowa diyifo foforo a wɔfrɛ no Uriya, a wanyɛ n’ade te sɛ Yeremia no.
Bible ka sɛ: ‘Uriya kɔɔ so hyɛɛ nkɔm tiaa Yerusalem sɛnea Yeremia nsɛm no nyinaa te.’ Nanso bere a Ɔhene Yehoiakim bo fuw Uriya no, wunim nea Uriya yɛe?— Ehu kaa no ma ogyaee Onyankopɔn apɛdeyɛ, na oguan kɔɔ Egypt. Enti, ɔhene no somaa mmarima sɛ wɔnkɔhwehwɛ no wɔ hɔ na wɔnsan mfa no mmra. Bere a wɔde no bae no, wunim nea ɔhene tirimɔdenfo no yɛe?— Ɔma wɔde nkrante kum no!—Yeremia 26:8-24.
Dɛn nti na wususuw sɛ Yehowa bɔɔ Yeremia ho ban, nanso wammɔ Uriya ho ban?— Nokwarem no, ebia ehu kaa Yeremia sɛnea ɛkaa Uriya no, nanso Yeremia kɔɔ so som Yehowa, na wanguan. Wannyae Yehowa som. Dɛn na wususuw sɛ yebetumi asua afi Yeremia nhwɛso no mu?— Ɛne sɛ ɛtɔ mmere bi a, ebetumi ayɛ den sɛ yɛbɛyɛ nea Onyankopɔn pɛ, nanso ɛsɛ sɛ yenya ne mu ahotoso daa na yetie no.—w09-E 12/1.
^ nky. 3 Sɛ worekenkan akyerɛ abofra na wuhu sɛ wɔasan baabi sɛɛ (—) a, ɛkyerɛ sɛ gyina na hyɛ abofra no nkuran ma ɔnkyerɛ n’adwene.
○ Adwuma bɛn na Onyankopɔn de maa Yeremia?
○ Dɛn nti na Yeremia pɛe sɛ ogyae Yehowa som?
○ Dɛn nti na wɔbɔɔ Yeremia ho ban, nanso wɔammɔ Uriya ho ban?
○ Dɛn na woasua afi Yeremia nhwɛso no mu?
Share Share Yeremia Annyae Yehowa Som
w10 1/1 kr. 24-25